မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပက်သက်၍မကြာခဏတွေ့ရသောမေးခွန်းများ - intouchmedicare
လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ စစ်ဆေးမှု အစီအစဉ် (STD)
ကုမ္ပဏီများမှများသောအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည့်အလုပ်မစတင်ခင်ကျန်းမာရေးကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းအချက် (၁၄) ချက်
လက်မောင်းအောက်သားဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်း VS သားကြောဖြတ်ခြင်းသည်ဘယ်နည်းလမ်းကပို၍ကိုယ်၀န်တားနိုင်ပါသလဲ
Last updated: 2022-03-25 | 990 ကြည့်ရှုခြင်း |
အမှန်လက်တွေ့အားဖြင့် မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးမှု့သည် ရှုပ်ထွေးပြီးကြောက်စရာကောင်းသောစစ်ဆေးမှု့မျိုးမဟုတ်ပါ။ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်မှု့များဖြစ်ပေါ်သည်ဟုသံသယရှိသောအခါ အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင် 1 ကြိမ်စစ်ဆေးသင့်သောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။သို့ပေမဲ့ ၄င်းအကြောင်းအရာနှင့်ပက်သက်၍စိုးရိမ်စိတ်နှင့်သံသယဝင်နေသေးသည့် မနည်းသောမိန်းကလေးများလည်းရှိပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့မှမိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပက်သက်၍ နားလည်မှု့မှန်ကန်စေရန်အတွက် မကြာခဏတွေ့ရတတ်သောမေးခွန်းများအားစုစည်း၍ဖော်ပြမှာကြားပေးပါမည်။
အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ဆိုသည်မှာ လိင်မအင်္ဂါမျိုးပွားမှု့စနစ်ဖြစ်သည့် မူမမှန်မှု့အားသိရှိရန်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။သားအိမ်၊သားဥပြွန်၊သားဥအိမ် ဖြစ်စေ ပုံမှန်အားဖြင့်ရလဒ်အဖြေသည် 24 နာရီအတွင်း (သို့)7ရက်ထက်အချိန်ပိုစောင့်ရမလိုပဲ သိနိုင်ပါသည်။သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရှာဖွေစစ်ဆေးမှု့ (Pap Smear) အခြေအနေမျိုး၌ အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ (သို့) မီးယပ်စစ်ဆေးခြင်းများသည် မိမိတွင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးသောရောဂါ (သို့) ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောရောဂါများ (သို့) အန္တရာယ်များအား ကာကွယ်မှု့နှင့်သင့်တော်သောကုသမှု့အားပြုလုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
2. မည်သို့သောသူများသည် အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ခံယူသင့်ပါလဲ?
အများစုသည် အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးများသာ အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ (သို့) မီးယပ်စစ်ဆေးမှု့အားခံယူသင့်သည်ဟု နားလည်ထားကြပါသည်။သို့ပေမဲ့ အမှန်အားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် မည်သည့်အရာကသာမန် (သို့) လက္ခဏာပြခြင်းမရှိပဲ ပြင်းထန်သောရောဂါများ၏ငုပ်လျှိုးနေမှု့များအားသိနိုင်ရန်အတွက် အသက်အရွယ်တိုင်းတွင် အတွင်းစစ်ဆေးမှု့အားတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှု့ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်သင့်အား စိတ်အားနွေးထွေးပိုရစေခြင်း (သို့) မူမမှန်မှု့တစ်ခုတွေ့ရှိပါက အနည်းဆုံးသင့်လျော်စွာလိုက်နာပြုမူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့် မိသားစုအတွင်းသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်ဖူးသော ရာဇဝင်ရှိသောသူများသည် ပို၍သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအားစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
3. ဘာကြောင့် အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ခံယူသင့်တာလဲ?
အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ခံယူသင့်သောအကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်။ဥပမာ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ၊သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းသည်မိန်းကလေးများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောရောဂါအားစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး မိန်းမဂိုလ်အတွင်းပိုးဝင်ခြင်းအမျိုးမျိုးအား ရှာဖွေစစ်ဆေးမှု့များဖြစ်ပါသည်။မွေးလမ်းကြောင်း၌ဖြစ်ပေါ်တတ်သောပုံမှန်မဖြစ်များ၏အကြောင်းအရင်းများအားရှာဖွေစမ်းသပ်မှု့များဖြစ်သည့် ဥပမာ ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြူဆင်းခြင်း၊မိန်းမဂိုလ်ယားယံခြင်း၊အနံ့ဆိုးရှိခြင်း၊လိင်ဆက်ဆံနေစဥ်သွေးထွက်ခြင်း၊ယားယံခြင်း (သို့) လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့မှကူးစက်နိုင်သောရောဂါ၊ (သန္ဓေတားဆေးရေမြှုပ်များ) အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းများအပြင် သန္ဓေတားရန်စီစဥ်နေသူများ (သို့) ကိုယ်ဝန်ရှိနေသူများသည်လည်း မီးယပ်စစ်ဆေးမှု့အားခံယူသင့်ပါသည်။
4. မည်သည့်လက္ခဏာများသည် အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ခံယူသင့်ပါလဲ?
နှစ်စဥ်စစ်ဆေးမှု့အားခံယူခြင်းအပြင် အကယ်၍အဆိုပါလက္ခဏာများရှိလာပါက အကြောင်အရင်းအားသိရှိနိုင်စေရန်နှင့် စောလျင်စွာနှံ့စပ်သောကုသမှု့အားရယူရန် အတွင်းပိုင်းစစ်ဆေးမှု့အားခံယူသင့်ပါသည်။ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း (ဆီးခုံ) ၌ရစ်ရစ်၍အောင့်သည်ဖြစ်စေ၊ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း (ဆီးခုံ) ၌အကြိတ်အားစမ်းမိခြင်း၊မိန်းမဂိုလ်အနီးတစ်ဝိုက်၌အနာဖြစ်ခြင်း၊မအင်္ဂါယားစပ်ခြင်း၊ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြူဆင်းမှု့ပျားပြားခြင်း (သို့) အရောင်ပြောင်းခြင်း၊အနံ့ဆိုးရှိခြင်း၊မအင်္ဂါ၌ရေကြည်ဖုများထွက်ခြင်း၊ရာသီမမှန်ခြင်း၊လိင်ဆက်ဆံနေစဥ်အချိန်၌သွေးထွက်ခြင်း၊မကြာခဏဆီးသွားခြင်း၊အချို့သောလက္ခဏာများသည် ပြင်းထန်မှု့မရှိသော်လည်း အန္တရာယ်ရှိပြီးပြင်းထန်သောသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရောဂါ၏ သတိပေးအချက်ပြမှု့များလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
5. အတွင်းစစ်ဆေးခြင်းသည် နာကျင်ပါသလား?
မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးရာတွင် ဆရာဝန်သည် LAB ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်စစ်ဆေးရန်အလိုရှိသောဆဲလ်များအားသိမ်းယူ၍ တစ်ဦးချင်းစီနှင့်သင့်လျော်သော ကိရိယာအား မအင်္ဂါဇာတ်အတွင်းသို့ထည့်သွင်း၍စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါလုပ်ထုံးခုပ်နည်းသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1-2 မိနစ်ကြာမြင့်ပါသည်။ထို့ကြောင့် နာကျင်ခြင်း (သို့) အနည်းငယ်တင်းမှု့အားဖြစ်စေနိိုင်ပြီး သို့ပေမဲ့ဤလက္ခဏာများအားလုံးသည် စစ်ဆေးပြီးနောက် ပျောက်ကင်းမည်ဖြစ်ပြီးလျှင် အလွန့်အကျွံ့နာကျင်မှု့ရှိကြောင်းအားလည်းတိကျစွာအာမခံပါသည်။
6. အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ခံယူရန် ဘယ်လိုပြင်ဆင်လာရမည်လဲ?
မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်မီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု့များအတွက် မတင်းကျပ်သောအဝတ်အစားများကိုသာဝတ်ဆင်လာသင့်ပါသည်။မိန်းမဂိုလ်အားဆေးကြောခြင်းများမပြုလုပ်လာရန် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆရာဝန်မှ ရောဂါလက္ခဏာအမှန်အား သိရှိနိုင်ရန်ဖြစ်ပါကြောင့် အကယ်၍ ဖြစ်နိုင်လျှင်စစ်ဆေးမှု့မပြုမီလိင်ဆက်ဆံခြင်းရှောင်ကြဥ်ပေးထားပါရန် သို့သော် အမွှေးများရိတ်ရန်မလိုအပ်ခြင်းနှင့်မစစ်ဆေးမီ ဆီးသွားသင့်ပါသည်။ထို့အပြင် ဆရာဝန်၏မေးခွန်းများအားဖြေဆိုရန်အတွက် မိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားပေးသင့်ပါသည်။ဥပမာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖူးခြင်း၊ကလေးမွေးဖွားဖူးခြင်း၊အခံရောဂါ၊မျိုးရိုးဗီဇရောဂါအန္တရာယ်များ (သို့) ယခုအသုံးပြုနေသောသန္ဓေတားနည်းများအပါအဝင် ဆရာဝန်မှရောဂါစမ်းသပ်ရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် ဤအချက်အလက်များအားယူဆောင်လာပေးသင့်ပါသည်။
မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးမှု့သည် လုံးဝကြောက်စရာမဟုတ်ကြောင်းနှင့်နာကျင်မျု့မရှိကြောင်းအားတွေ့နိုင်ပါသည်။အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင် 1 ကြိမ်ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား မူမမှန်မှု့များသိရှိနိုင်သည့်အပြင်ဆရာဝန်ထံမှ လိုက်နာရမည့်မှန်ကန်သင့်လျော်သောကာကွယ်ကုသမှု့ရယူရန် အကြံဥာဏ်ကောင်းများကိုပါရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။သံသယရှိသူများအတွက် (သို့) မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးလိုသူများအတွက်သင်အိမ်နှင့်နီးသော Intouch Medicare ဆေးခန်းဌာနခွဲတိုင်းတွင်ဝန်ဆောင်မှု့အားရယူနိုင်ပါသည်။သင်နှင့်နီးသော ဆေးခန်းအားရွေးချယ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု့အားရယူရန်အတွက် Google တွင်ရိုက်ရှာနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် အထူးကုဆရာဝန်များနှင့်ခေတ်မီသောကိရိယာများ သင်အားယုံကြည်စိတ်ချစေပြီးကာကွယ်နိုင်ဆုံးနှင့် စစ်ဆေးမှု့ရလဒ်အဖြေများအား မြန်ဆန်တိကျစွာဝန်ဆောင်မှု့များပေးနေပါသည်။
ตรวจภายใน นรีเวช คัน ตกขาว มีกลิ่น เหม็น ลูกไก่ ฟองน้ำ ใกล้ฉัน မိန်းမဂိုလ်အတွင်းစစ်ဆေးမှု့ မီးယပ် ယားယံခြင်း အဖြူဆင်းခြင်း အနံ့ရှိခြင်း နံခြင်း ကြွက်နို့ ရေမြှုပ် သင်နှင့်နီးသော
ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ခြေရှိသော အန္တရာယ် ၁၀ ခု